I-USA Table Tennis neBlossom Hotel Houston Manje Joyina Amandla
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » I-USA Table Tennis neBlossom Hotel Houston Manje Joyina Amandla
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • emihlanganweni • Izindaba • Sports • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
I-USA Table Tennis (USATT) kanye neBlossom Holding Group namuhla bamemezele ukuthi iBlossom Hotel Houston isiqokwe njengeHhovisi Elisemthethweni le-USATT. Ngaphansi kwalesi sivumelwano, umfaniswano we-US National Table Tennis Team uzokhombisa uphawu lweBlossom Hotel Houston, ihhotela eliyingqayizivele eliphakeme futhi eliphakeme elisenkabeni yedolobha iHouston.
IBlossom Hotel Houston ibheke phambili ekunikezeni abadlali nabalandeli be-USA Table Tennis umuzwa wokungenisa izihambi waseHouston.
Kukubanga lokuhamba ngezinyawo lesifunda esidumile semnyuziyamu futhi sizungezwe izindawo zokuthenga, zokudlela nezokuzijabulisa.
IBlossom Hotel Houston empeleni ingaziwa kakhulu ngokubuyisela emphakathini waseHouston.
“Sijabule kakhulu ukwamukela IBlossom Hotel Houston emndenini wase-USATT, ”kusho uMphathi Omkhulu uVirginia Sung. “Akukona nje kuphela ukuthi ihhotela liyindawo enhle, esezingeni eliphezulu enezinto eziklanywe ngokumangalisayo, kodwa futhi iqembu lobunikazi likhombise ukuzibophezela ekuzinikeleni ekwenzeni ngcono izimo zabantu abahlala emphakathini waseHouston. Ithimba Likazwelonke laseMelika lizoziqhenya ngokugqoka uphawu lweBlossom kuyo yonke imicimbi yethu esemthethweni. ”
"Kuyinhlonipho yethu enkulu ukusebenzisana ne-USA Table Tennis futhi sinikeze ukwesekwa nokwamukelwa kwethu kubasubathi abaphambili eqenjini lase-US National Table Tennis," kusho isikhulu seBlossom Houston Hotel, uCharlie Wang. "Njengehhotela elisha kunazo zonke laseHouston, sibheke phambili ekunikezeni abadlali nabalandeli be-USA Table Tennis ithuba elihle lokungenisa izihambi eHouston."
Umakhelwane weTexas Medical Center edume umhlaba wonke edolobheni laseHouston, i IBlossom Hotel iphakathi nebanga lokuhamba lesifunda esidumile semnyuziyamu futhi izungezwe izindawo zokuthenga, zokudlela nezokuzijabulisa. Ngokuhambisana nesidlaliso sikaHouston njengeSpace City, iBlossom inezici zokuklama ezinconywe yinyanga. Ngamagumbi okuvakasha kanokusho angama-267, indawo yokunethezeka enezitezi eziyishumi nesithupha inikela ngamamitha angaphezu kwangu-9000 esikhala somhlangano esiguquguqukayo kanye nesikhungo sokuzivocavoca sePeloton® sesimanje. IBlossom igudluzwa ngechibi elimangalisayo elisophahleni lwendlu negumbi lokuphumula elinikeza ukubukwa okuningana kwedolobha laseHouston.
Ekuqaleni kwayo, iBlossom Hotel Houston empeleni ingaziwa kakhulu ngokubuyisela emphakathini waseHouston. Ngaphezu kokunikeza abantu bendawo imisebenzi engaphezu kuka-150 ehlinzekwe ngesikhathi sokuphakama kwalolu bhubhane, ubunikazi beBlossom babuye banikela ngezinsizakusebenza nobuchwepheshe babo ukusiza abantu abaswele ngesikhathi sesiphepho sasebusika esilimaza muva nje eTexas, njengomnikazi uCharlie Wang's inkampani yokwakha ilungise umonakalo odalwe ukuqhuma kwamapayipi amanzi emindenini engaphezu kuka-120 yendawo.
Uphawu lweBlossom Hotel luzoboniswa kumayunifomu eqembu lase-US leThebula Likazwelonke aqala ngokushesha.